मेरा सपनाहरु : कथाहरु :
ऊ सरासर एउटा दोकान मा पसेर रेचार्ज कार्ड किन्छ अनी मिसकल हानेको भाईलाई कल गर्छ । उता बाट भाईले १२ कलास पास् गरेको खबर सुनाउछ उस्का हल्का चाउरिएका गालामा एक पल मुस्कान छरिन्छ अनी फिस्स हाँस्दै भाईलाई बधाई दिन्छ तर भाईले उर्दी लगाएको बि ए भर्ना को लागि फि को माग ले एकैछिन मा झसँग हुन्छ । हैन बिदेस मा त पैसा को बोटै फल्छ भन्ठान्छन् कि के हो यिनिहरु फोन राखेसी एक्लै थन्थनाउछ ऊ । सम्झिन्छ जिन्दगीलाई फर्केर, दुबइ छिरेको पनि ठ्याक्कै ८ बर्ष लागिसकेछ अझै नेपाल नगएको त अब अर्को महिना मा ५ बर्षा लाग्छ । सबैले दुबइ को रामझम मा भुलेर घर जादैन भन्छन तर कस्लाई के थाहा उस्को ब्यथा ।
पाँच बर्ष अघी सम्मा उस्मा जोस थियो जिन्दगी जित्ने रहर थियो सधैं साथी भाई लाई भन्थ्यो शायद अब म धेरै बिदेस बस्दिन होला । उस्की प्रियासी शोभा ले भनेकी थि तिम्रो बाटो कुरेर बसेकी हुनेछु सधैं हाम्रो जिन्दगीको मधुमास को लागि तिमी छिट्तै फर्केर आउ प्रदिप । उस्लाई त्यतिबेला आँफैले बोकेको १० किलो को झोला पनि प्रिथिबी जत्रो ठुलो र गर्हौ लाग्यो तर पनि गर्नु के मानिसको सबै भन्दा ठुलो सत्रु भनेकै गरिबि रहेछ । पाइताला भरी काँडा बिझेको आभास भएथ्यो उस्लाई त्रिभुबन बिमान्स्थल मा बिमान चढ्दा अनी सिन्दुर हालेर सात फेरो घुमेर आफ्नी बनाएकी जिबन सङिनी सोभालाई हात हल्लाउदै बिदाइ गर्दा । आखिर के थाहा उस्लाई त्यो हल्लाएको हात नै अन्तीम् बिदाइ थियो भनेर ।
दुबइ आएसी एकदमै खल्लो महसुस गरेको थियो उस्ले । सधैं गर्ने काम पनि नयाँ लाग्थ्यो, सधैं हास्ने बोल्ने साथीहरु पनि नौला लाग्थे मात्रा ऊ हरपल सोभाको बारेमा सोचिरहन्थ्यो । सकेसम्मा दिनको एक्पटक त फोन गर्थ्यो तर सधैं पैसा ले साथ नदिदा हप्ता मा एक्फेरी त फोन गर्थ्यो अनी छिट्टै गाउमै फर्केर केही गरी सँगै बस्ने कुरा हरु गरिरहन्थ्यो सोभा सँग ऊ । परिवार को जेष्ठ छोरा कर्तब्य अनी परिवार को भबिस्य पनि उसैको काँधमा थियो । महिनै भरी खटिएर दु:ख गरेर काम गर्थ्यो अनी तलब आएसी भाग लगाउथ्यो । यसरी उस्का दिन बित्दै गए उता उस्की प्रियासी शोभा पनि सधैं उस्लाई मिस गरिरहन्थी । दुबै जना सधैं मिस कल हानेर कुरा भएको आनन्द लिन्थे आखिर पैसा नै रहेछ सबैथोक । बेला बेला मा सोभाले उस्लाई सुनाउथी पल्लाघरे मास्टरकी श्वासनिले कत्रो सुनको सिक्री लगाएर हामीलाई देखाउदै हिड्छे । हेर्नु न त्यो माथिकी मन्जुले बिहे गरेको ८ महिनामै छोरो पाइछे आफ्नो त के हो के तपाईंलाई सधैं पैसाकै चिन्ता छ् घरपरिवार कै चिन्ता छ् आफ्नो बारेमा सोच्ने हैन ?? उस्ले मुसुक्क हासेर भन्थ्यो शोभा पर्ख न केही महिना अरु हाम्रा पनि दिन आउछन क्या !! मन भने अमिलो हुने गर्दथ्यो ति सबै कुरा सुनेर ।
त्यसपछी ऊ नेपाल गएको छैन झन्डै पाँचै बर्षा पुग्नै लाग्यो । बिहान उठ्यो हतार हतार मेट्रो चढेर काममा पुग्यो फेरी राती ८ / १० बजेतिर लखतरान परेर फर्कियो यसरी नै उस्का दैनीकी चलिरहेको छ् । घर बाट आमाले हजार चोटि घर आउने बिन्ती गरिन तर पनि उस्ले सधैं छुट्टी मिलेन भनेर ढाटिदिन्छ । गाउँतिर त उतै दुबइ मा बिहे गरेर बसेको छ् रे भन्ने सम्मको हल्ला पनि नचलेको हैन बेला बेला मा आमाले गुनासो सुनाउछिन उस्लाई । उस्को अरु सपना छैन मात्रा घरको रिन तिर्ने अनी भाईहरुलाई राम्रो बाटो देखाउने तर यो सपना उस्ले रातदिन खटेर काम गर्दा पनि सम्भब भाईरहेको थिएन । एक किसिमले जिबन देखी नै हारेको महसुस गर्थ्यो ऊ , न त खोजेको भेट्थ्यो न त सोचेको पुग्थ्यो उस्को जिन्दगी आँफैलाई बोझ लागेको ठान्दथ्यो ऊ ।
मोबाइल मा फेरी घन्टी बज्छ यसपाली भने कलै रहेछ । झिकेर हेर्छ आफ्नो रुम मेट को रहेछ । हैन ! प्रदिप तिमी कता हराएको यार म आइसके एक बोटल पनि ल्याको छु बरु तिमीले आउँदा चिकेन फ्राइ लिएर आउ है अब चिरिप्प पार्नुपर्छ । उस्ले हुन्छ भनेर मात्रै फोन राखिदियो । प्लस्टिकको कप मा आधा मात्रै पिएको चिया छोडेर ऊ निस्कियो त्यहा बाट । हाबा सिर्र सिर्र लागेको थियो सडक मा गाडीहरु तेज कुदिरहेका रहेका थिए । साँझ झिसमिस हुँदैथियो गगन्चुम्बी महलहरु बिजुलिका झिल्का बिभिन्न रंग मा छाडेर मस्किदै थिए । ऊ बर्जुमान स्टेसन मा उत्रियो अनी लर लर पाइलाहरु लम्काइरहयो सधैं झै उही गतिमा । मन मा मेट्रो को गती भन्दा पनि छिटो कुरा खेलिरहेका थिए
ऊ पर बर्जुमान टावर बाट आएको झिल्मिल प्रकाश ले उस्लाई जिस्काइरहेको थियो ए प्रदेसी !! ए प्रदेसी कहाँ जादै छौ ............. ??
एउटी अन लाइन साथी.....
हैन हौ हजुर त कस्तो छुच्चो मान्छे नी - उनी लजाउथिन पनि .... Continue to read
यात्रा मानिसको जीवन मा केही न केही अनुभुती बोक्ने या भनौ कुनै क्षणहरु पल पल आखाभरी नाचिदिने पनि हुन्छन् । यात्रा मा देखेका भोगेका कुरा हरु पक्कै पनि ज्ञान बर्दक त हुन्छन नै चाहे राम्रा या त नराम्रा कुरा हरु को अनुभव होस् तर यात्रा वास्तव मै एउटा आफैमा अनिस्चित पनि हुन्छ जब सम्म गन्तब्य छिचोल्न सकिदैंन ।
म अघिल्लो महिना मा एउटा इमर्जेन्सी काम परेर नेपाल गएको थिए यसरी इमर्जेन्सी जादा मेरो कम्पनी ले हरेक कामदार लाई आफ्नै खर्चमा आवत जावत गर्ने नियम लागु गरेको छ यही कारण ले मैले पनि सस्तो फ्लाईट कुन छ त भन्दै एइरलाइन्स चाहर्दा चाहर्दा मेरो हात मा यो फ्लाई दुबइ हात परेको हो । त्यतिबेला मेरो कम्पनी मा मैले पाएको सिनियर को सपोर्ट निकै नै सराहनिय छ शायद म भुल्न नै सक्दिन पनि । रातीको फ्लाईट भएको ले म यहाँ को समय अनुसार १० बजे नै दोहा एइरपोर्ट पुगेको थिए । मेरो फ्लाईट रातीको २ बजे थियो म बिमन्स्थल को माथिल्लो कक्षा मा बसेर चारैतिर नजर हरु घुमाइरहेको थिए । म अली महत्वकान्क्षी पनि छु मन मा अनेक कुरा हरु कल्पेर आफै भित्र आनन्द पनि लिन्छु त कोही बेला बेकार मा दिमाख पनि खल्बलाउछु मलाई लाग्छ मेरो कमजोर पक्ष मा यसले जोड तोड भूमिका खेलेको छ ।
म बसेकै नजिकै हुँदै एकहुल युबा हरु दगुर्दै आए लाग्थ्यो उनीहरु आखभरी सपना बोकेर सुनौलो गन्तब्यको खोजिमा थिए । सबैको हात मा हरियो राहदानी अनी कलिला अनुहार देखे पछि मलाई उनीहरु मेरै देस नेपाल बाट आउदैछन भन्ने कुरा थाहा पाउन गार्हो भएन अझ उनीहरु अल्मलिरहेका थिए कता जाने कता ? यो द्रिस्य देखेर मलाई पनि दुई बर्ष अघिको याद आयो म पनि हातभरी झोला अनी आँखाभरी सपना बोकेर यही बिरानो मुलुक प्रबेस गरेको थिए । उनीहरु को भिडले एक्छिन त्यहाँ असम्ज्जा नै पर्यो अनी त्यहाँ का सुरक्षाकर्मी हरु याल्ला याल्ला भन्दै उनीहरु लाई वैटिङ रूम तिर धपाउन थाले । उनीहरु को व्यबहार निकै हेपाह थियो तर पनि के गर्नु र आखिर नेपाली हरु जहाँ पनि हेपिएकै त छौ नी बाहिर को त के कुरा गर्नु आफ्नै देश भित्र बाहिरी मुलुक बाट हेपिनु को पिडा म त कल्पना गरे पनि सुस्ताबसी हरु दिनदिनै खेपिरहेका नै छन् । आखिर दोस कस्को ??????
मेरो मनमा कौतुहुलता लाग्यो अनी टिठ पनि किनकी त्यो हुल कता जाने कता जाने दोधार मा परेको थियो हुन सक्छ उनीहरु प्र्याप्त सक्षरता हासिल नगरेका वा पहिलो चोटि बिदेसको भुमिमा पाइला हालेका थिए । मैले एकजना भाईलाई वैटिङ रूम तिर जाने बाटो सन्केत गरिदिए अनी उनकै पछि लागेर त्यो हुल वैटिङ रुम को कुर्चिहरुमा छरिए मलाई झट्ट मेरो गाँउको एउटा खसी ब्यापारी को याद आयो जसले दशैं तिहार मा हाम्रो गाउँभरी थुपारिदिन्थ्यो शायद यिनीहरुलाई यसरी बिदेस पठाउदा पक्कै पनि कति जना ब्यापारी ले निस्चित आम्दानी कुम्ल्याए उनीहरु को आखाभरी सपना थुपारेर । हुन सक्छ रजनितिक समस्या को समाधान नभए हाम्रो मुलुक को स्थिती अझ दिन दहाडै अनेक समस्या ले झेलिने छन् अनी हरेक युबा शक्तिको गन्तब्य भनेको नै बिदेसी भुमी हुनेछ जसरी यो प्रक्रिया जोड्तोडका साथ अगाढी बढिरहेको छ ।
घढी का सुइ आज निकै ढिला घुमेको महसुस गरेको थिए मैले । भन्थे प्रतिक्षा गर्न गार्हो छ शायद रहेछ क्यारे मलाई पनि कति बेला समय होला र प्लेन मा बसौला भैर्हएको थियो । म बिमन्स्थलकै परिसर मा घुम्न थाले । ए सी को चिसो ले कफी पिउन मन लाग्यो अनी म नजिकैको क्याफ्टेरिया मा पुगे । मैले कफी सोध्न के थालेको थिए एक्जना नेपाली दाजु काम गर्नु हुदो रहेछ उहाँले मलाई देख्न बित्तिकै "होयेर आर यु फ्रम" भन्नु भो मैले नेपाल भने अनी त उहाँले मेरो फ्लाईट छुटेको भन्ने ठान्नु भएछ क्यारे उहाँले जबर्जस्ती तिकट देखाउन भन्नु भो । मैले दाजु मेरो फ्लाईट लेट छ म फ्लाई दुबइ बाट जान लागेको भन्दा पनि उहाँले पत्याउनु नै भएन । म भने कफी मागिरहेको छु उहाँ मलाई तिकेट माग्नु हुन्छ मलाई अती रिस उठ्यो अनी रिस ले "ह्वाइ डोन्ट यू अन्डर्स्टन्ड" भने को अलिकती खुम्चिनु भो अनी फेरी कफी त महँगो छ भाई भनेर उझेरो निकाल्नु भो । मैले भने मलाई थाहा छ रेट अघिनै मेनुमा हेरेको । उहाँले यति महँगो कफी हामी नेपाली ले खानु हुदैन भन्न थाल्नु भयो मलाई साँच्चिकै रिस उठ्यो अनी म फरक्क फर्केर हिंड्न थाले एउटा फिलिपिनो वेटर व्हाट ह्याप्पेन् सर भन्दै पछाउदै थियो मैले आस्क हिम भन्दै बाटो तताए । यो घटना ले मलाई के अनुभव भयो भने हामी नेपाली आफुमा नै कोन्फिडेन्ट छैनौ अनी हामी आफैलाई विश्वाश गर्न सक्दैनौ । के नेपाली ले एअरपोर्ट मा कफी पिउनु हुदैन ? रक्सी खाना नपाइने देस मा काम गर्दा लुकी लुकी १०० रियाल को एक बोत्तल रक्सी किनेर खादा महँगो नहुने जाबो एउटा कफी खादा महँगो हुने ? यस माने मा हामी मा एउटा नराम्रो लात भेटियो कुलत मा हामी जे पनि गर्छौ जो हामीलाई सजिलो पनि लाग्छ र राम्रो काम हो भने हामीलाई गार्हो भएको महसुस गर्छौ । मैले त्यो दाजुलाई भन्न भुलेछु दाजु नेपाली हरु "तपाइ कफी बनाउने देखि पएअर्ल कतार मा लगानी गर्ने नेपाली हरु यो दोहा कतार मा छन् भन्ने कुरा "
म नेपाल पुगेर फर्किदा पनि मन मा चित्त नबुझ्ने नै द्रिस्य देखे शायद हामी नेपाली हरु को नियती नै बनेको छ । आज भोली त उडान गर्ने पुरुष मात्र नभएर महिला को संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढेको पाईन्छ । यस्तैमा म त्रिभुबन अन्तरास्ट्रिय बिमान्स्थल क्रस गरेर प्लेन मा जानको लागि बस मा बसेको थिए एक्जना १६ / १७ की युबती फतफताउदै भित्र पसिन । यो त होईन होला कता जाने होला उनी बसभित्र पसेर कराउदै थिन । मैले भने बैनि यही हो बस्नुहोस् यसैले पुर्याउछ जहाज सम्म । यसो हेरेको जिन्स पाइन्ट लगाएकी फस्नर खुस्केर भित्री बस्त्र सम्म देखिएको रहेछ मैले हत्त पत्त बैनी यसलाई समाल्नुहोस् भने उनीले त उल्टो मलाई पो कस्ता कस्ता ठाउमा आँखा पुर्याउने भनेर पो हपारिन मलाई आफैलाई लाज लाग्यो । उनको खिल्ली उड्ला भनेर सजग गराउदा उल्टै गाली पाए पछी मैले वास्ता गरिन। जब प्लेन दुबइ मा ट्रन्जिट गर्यो त्यहाँ त थुप्रै नेपाली महिला हरु कुबेत जानलाई पर्खिरहेका रहेछन । उनीहरुको ५ घन्टा ट्रन्जिट रहेछ तर पर्याप्त असिक्षा ले गर्दा होला शायद हरेक काउन्टर खुल्दा उनीहरु दौडेर लाइन मा बस्थे अनी फेरी त्यो काउन्टर का कर्मचारीले फर्काइदिन्थे । यो द्रिस्य देखेर मेरो मन निकै पोल्यो थुक्न मन लाग्यो ती नेता हरु लाई जसले आर्थिक बर्ष को बजेट भासन मा रेमिट्यान्स लाई समेटेर गर्व गर्छन्। के थाहा नेपाली हरु ले एस्पेसियल्ली खाडी मुलुकमा पाएको दुखद क्षण हरु कती भयानाक र दर्दनाक छन् भन्ने कुरा ।
मैले मेरो अनुभब बाट के भन्न चाहन्छु भने आदरणिय नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु लाई बिदेस भन्दैमा दलाल को भाउतोमा लागेर हाम फल्नु अगाडी आफु के का लागि बिदेस जादै छु त्यो काम को सुक्ष्म जानकारी किन नहोस् लिनु जरुरी छ अनी आफु जाने ठाउँ कस्तो छ के कस्ता कानुनी राज्य छन् जाने बेला बिमन्स्थल एबम बिमान मा बस्दा अपनाउनु पर्ने तरिका बुझेर जादा शायद जो कोहीलाई पनि त्यती प्रोबोलम नपर्ला की ...?
‘बोइलिङ पोइन्ट’मा बेलायतका नेपाली पत्रकार ?